BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 8 / Activity 1
1. Why is Li unhappy?
Har’a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu ‘beat around the bush’ naannawa miciree fi tuufoo rukkutuu jedhu ni barana. Maal jechuudha jette yaada? Wal’aaltee? Tole ittifufii caqasi.
Robiifi Liin amna imala bashannanaarra jiru. Reefuu bakkicha gahanii waan keessa bulan dunkaana dhaabbachuuf jedhu.Yeroo bashannana gaarii qabaachuuf jedhuu laata? Mee haa ilaallu.
Liin hafannaa amna bashannanaa kanarraatti waa yaaddofteetti. Waa’ee kwiisa goondaa ‘ants’ nest’, bubbee ‘winds’, akkasumas waa’ee ‘rain’ roobaa yaaddoftee jirti. Waan ishiin jette hubachuuf caqasi.
Rob rakkoon maal akka ta’e Liitti himuu barbbadeera garuu Liin waan barbaadde hinfakkaattu. Rob, Liin ‘beat around the bush’ akka hintaane gaafata. ‘beat’ jechuun rukutuu/dhawuu, ‘around’ jechuun naannawa, akkasumas ‘bush’ jechuun miciree ykn tuufoodha. Namni wayita waan dubbachuu barbaadan irraa bira qabanii yeroo dubbatan ‘beat around the bush’ jedhama, namoonni beat around the bush sababni isaas tarii waanti isaan jedhu barbaadan nama biraa tarii miira tuqu, mufachiisu ykn dallansiisu danda’a. nama tokkotti kallattiidhaan akka dubbatu ukn dubbachuu yoo barbaaddee, don’t beat around the bush jechuun jechoota of ibsuuf fayyadamnuu nama qeeqquuf illee fayyadamuun ni danda’ama.
Mee jechoota of ibsuuf itti fayyadamnu namoonni akka dhimma itti bahan fakkeenya muraasa haa dhageenyu.
The problem is... I hate camping!
Yeroo muraasaaf Liin ‘beating around the bush’ erga goote booda, waa’ee manaa fagaatanii afannaa ijaaranii keessa bulanii irrattii waan itti dhagahame Roobiif himtee. Jechoota Afaan Ingliziin of ibsuuf si fayyadan English Expressions dabalataaf yeroo itti aanu walitti deebina.
I've beaten around the bush for too long about this, I need to tell you that I can't come to your wedding.
Jecha kana jecha jalqabaa gaalee kanatti aansinee fayyadamuu qabna.
Gaaleen kun waa’ee mamii namootaa akka ta’e yaadadhu.
Jecha kana jecha ‘bush’ jedhu dura fayyadamuu qabna.